Gocha barattoota Hawaasa fakkeenyummaaf olu - BBC News Afaan Oromoo
Gocha barattoota Hawaasa fakkeenyummaaf olu
11 Waxabajjii 2018
Goodayyaa suuraa Gocha gaarii barattoota mana barnoota Taabor Hawaasaa
Gochi baratoonni Mana barumsaa qophaa'insaa Taabor Hawaasaa tibana erga qormaata kutaa 12 xumuraniin booda raawwatan mata duree fuula midiyaalee hawaasummaa ta'aniiru.
Barattoonni kunneenis erga barumsa isaanii xumuranii booda uffata danbii uffataa turan baafachuun bara dhufaatti ijoollee bitachuuf humna hinqabneef akka kennamuuf mana barumsichaatti kennaniiru.
Barattoota gocha kana waltaasisan keessa tokko kan taate barattuu Tsiyoon BBC'tti akka himteetti, ''barattoota rakkatan gargaaruu keenyaan gammachu sammu arganna. Bartoonni nu booda dhufanis uffata kana uffachuun bakka gaarii akka gahanis ni hawwiina,'' jetti.
''Yaadni kunis mana barumsichaatiif haaraa miti. waggoota lamaafi sadaffaaf gochi walfakkaatu raawwatamaa tureera,'' jechuun kan hima bakka bu'aa daarektara mana barumsichaa kan ta'an Tigist Tarafaatti. Kana maleess barattoonni saayinsii umamaa meeshaalee barnootaa ittiin barataa turan akka arjomanilleen himaniiru.
Manni barumsichaa kibabii tola oltummaa jalatti barattoota humna hinqabneef nyaata hiyeessaa kanneen bakka jireenyaa hinqabneef ammoo gargaara kiraa manaa taasisaa turu himaniiru.
Erga gocha tola oltummaa barattoonni kunneen taasisan fuula feesbuukii irratti maxxanfameen boodas lammileen kumaatamni wal harkaa fuudhaniiru. Kanneen suuraa qalbiisaanii harkise tokko tokkoos yaada barattoota jajjabeessu barreessaniiru.
Deebii hawaasa irraa argataniitti gammadusaanii kan himan bakka bu'aa daarektara Tigisti, dhimmichi fuulawwan midiyaalee hawaasummaa irratti mata duree marii ta'unsaa barattoonni manneen barumsaa biraa keessatti argamanis wal gargaarsa walfakkaatu akka taasisaniif ni kakaasa jechun akka amanan himu.
Barattoonni gocha fakkeenyummaa qabu kana keessatti qooda fudhatanis gara kuma akka ta'an himaniiru, Obbo Tigisti.
Pirezedaantiin Kaatolikii Itoophiyaa Eertiraa seenuu dhorkaman
MM Abiy daangaa amantii fi mootummaa jidduu jiru ce'anii?
Hoong Koong jiraattotaaaf qarshii 39,000 kennuuf
Aangoon bulchiinsaa Naayiroobii maaliif harka pirezidaantii biyyattii gale?
Oromiyaatti weerarri gifiraa lubbuu namootaa galaafataa jira
Sa'uudiin garee kubbaa miillaa dubartootaa hundeessuuf
Koronaavaayirasiin Itaalii irraa ka'uun biyyoota Awurooppaatti tatamsa'aa jira
Namoota 'qufaa hamaa' qabaniif qoricha abdii kennu